(SAWIRO): Alshabaab oo sheegatay mas’uuliyadda Qaraxii duullimaadkii Daallo Airlines – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(SAWIRO): Alshabaab oo sheegatay mas’uuliyadda Qaraxii duullimaadkii Daallo Airlines
On Feb 13, 2016 Last updated Feb 14, 2016
Hadal-qoraal oo ay Alshabaab maanta shaaciyeen ayey ku sheegteen mas’uuliyaddii qarixii bishan Federaayo 2-dii lala beegsaday Diyaaradda Daallo Airlines oo ka kacday Garoonka Muqdisho, kuna sii jeeday dalka Jabuuti.
Telefishinka Aljazeera oo helay Nuqul ka mid ah Qoraalka Alshabaab ku qirteen Qaraxa Daallo Airlines, ayey Alshabaab ku sheegeen inay qaraxaasi la beegsadeen Saraakiil Reer Galbeed ah, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Alshabaab waxay intaasi ku dareen in Qaraxii Daallo Airline uu qeyb ka yahay Hawlgalo lagu beegsanayo Tobaneeyo Saraakiil ka tirsan Sirdoonka Reer Galbeedka iyo Saraakiisha ciiddanka Turkishka ee Isbahaysiga NATO, waa sida Alshabaab hadalka u dhigeen.
Qoraalka waxaa kaloo lagu xusay in Qaraxaasi fal-celin u ahaa Dembiyadda ay Isbahaysiga Reer Galbeedka iyo Hay’addahooda Sirdoonka ka galeen dadka Muslimiinta ee Somalia, waa sida ay Alshabaab ku caddeeyeen Qoraalkooda.
Diyaaraddaa Daallo ee bishan 2-dii lala begesaday Qaraxaasi waxa ku geeriyooday Nin magaciisa lagu sheegay C/llaahi C/raxmaan Boorle, kaasi oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeyey qaraxaasi.
Sidoo kale, qaraxaasi waxaa ku dhaawacantay 2-qof oo ka mid ah Rakaabka Diyaaradda, wuxuuna qaraxuduleel dhererkiisu dhamaa Hal mitir ka sameeyey qeyb ka mid ah Diyaaradda.
Dhinaca kale, Ninka lala xiriirinayo qaraxaasi ayaa la sheegay inay u suurto-gashay inuu baaritaan la’aan kala soo gudbo Laptop-kii uu ku fuliyey qaraxaasi Hannaanka Baaritaanka ee Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho.
Kameerooyinka Qarsoon ee ku rakiban gudaha Garoonka Diyaaradaha ayaa laga dheehday Muuqaalo ka markhaati kacayo inuu C/llaahi C/raxmaan Boorle ahaa Ninkuu fuliyey qaraxii laga badbaaday ee Diyaaradda Daallo Airlines.
Hay’addaha Sirdoonka Qaranka iyo kuwa Amniga ayaa weli ku hawlan baaritaanka qaraxaasi, waxaana la soo qabtay Tobaneeyo qof oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin Kiiska Qaraxa Shirkadda Daallo Airlines ka badbaaday.
Xulka K/cagta ee dalka DRC oo lagu abaalmariyey gawaari Casri ah.
(SAWIRO): Golaha Wasiirada oo Kulan gaar ah kaga hadlay dib-u-eegista Dastuurka KMG ah